LibreOffice 6.4.5 inosvika ichigadzirisa zvinopfuura zana bugs Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 6.4.5 inosvika ichiruramisa anopfuura zana mabhugi uye inova iyo yakakurudzirwa vhezheni yezvikwata zvekugadzira
Iyo Gwaro Siseko inoita kuti iwanikwe kune vashandisi dzinenge nhatu shanduro dzehofisi yayo suite panguva imwe chete: iyo yekutanga vhezheni, ine v7.0 ikozvino inogona kuyedzwa, iyo yakagadziriswa yakavandudzwa vhezheni, ine dzese nhau asi isina kuyedzwa uye iine mamwe mabhugi kupfuura zuro yaive iyo v6.4.4, uye imwe vhezheni ine zvimwe zvakawanda zvinogadziriswa izvo zvinokurudzira zvikwata zvekugadzira. Kwemaawa mashoma, maviri ekupedzisira akafanana, nekuti TDF yakatanga LibreOffice 6.4.5.
Sezvineiwo, izvi, izvo zvakaziviswa zviri pamutemo paTwitter, hazviratidzike sezvizvi pane peji rekurodha re projekiti, kwarinoramba richiita se vhezheni inokurudzirwa yezvikwata zvekugadzira FreeOffice 6.3.6. Chero zvazvingaitika, chero munhu anotevera chirongwa ichi anoziva kuti Iyo Gwaro Foundation inokurudzira iyo nyowani vhezheni yezvikwata zvinoda kuchengetedzeka uye kugadzikana kana vangoburitsa zvishanu shanduro dzekuchengetedza, uye ndizvo chaizvo zvavakaita nezuro.
LibreOffice 6.4.5, imwe yeshanduro dzekupedzisira kusati kwaburitswa LibreOffice 7
Iyo Gwaro Foundation inosheedzera kuwanikwa kweLibreOffice 6.4.5, iyo inosanganisira pamusoro pezana zana kugadzirisa uye kugadzirisa. Vese vashandisi veLibreOffice vanofanirwa kusimudzira kune iyi vhezheni, iyo yakagadzirirwa kushandiswa mukugadzira. https://t.co/QMGyNbC9nl @libreoffice #freeoffice pic.twitter.com/bXYYuO9q3u
- LibreOffice (@libreoffice) July 2, 2020
Iyo Gwaro Sisekelo rinozivisa kuwanikwa kweLibreOffice 6.4.5, iyo inosanganisira zvinopfuura zana zvigadziriso uye kugadzirisa. Vese vashandisi veLibreOffice vanofanirwa kugadzirisa kune iyi vhezheni, iyo yakagadzirirwa kuti ishandiswe pamakomputa ekugadzira.
Chinhu chinonakidza ndechekuti, nezuro chaiye, kumwe kugoverwa kwakadai seUbuntu kwakaendesa v6.4.4 yeThe Document Foundation suite munzvimbo yavo yepamutemo. Uye, kana isu tichida kugadzirisa pavanongotanga vhezheni nyowani, sarudzo chete yatinayo ndeyekutora zvavanotipa mune yavo peji yepamutemo, zvavari DEB mapakeji, RPM uye kodhi / mabhinari. Chechipiri sarudzo ndeye kushandisa iyo Flatpak vhezheni, nekuti ndiyo iyo inowanzo gadziridzwa nekukurumidza kupfuura iyo vhezheni muSnap. Avo vedu varikushandisa zvinyorwa zvepamutemo zvekuparadzirwa kwedu kweLinux vachazofanira kumirira kwenguva yakati rebei, iyo nguva inoenderana nemhando yekuvandudza kana mhando yezvidzo zvinoshandiswa nehurongwa hwekushandisa.
Chero zvazvingaitika, LibreOffice 6.4.5 ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu, iyo inosanganisira Windows uye macOS, uye yatove yakachengeteka kushandisa pazvikwata zvebasa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 6.4.5 inosvika ichiruramisa anopfuura zana mabhugi uye inova iyo yakakurudzirwa vhezheni yezvikwata zvekugadzira
Francisco Pena akadaro
Mahara hofisi kusvika parinhasi anofanira kunge akagadzirisa zviuru zvezvikanganiso uye haamire, uye chakanyanya kushata ndechekuti hapana hunyanzvi, ini handina chokwadi chekuti suite yakanaka, asi haina zvakawanda, uye kuti ivo vari kutsikisa zviuru yezvikanganiso izvo zvavasisiri kugadzirisa Iyo inhau, asi ini handireve kuve nehutsinye, chete kuti ivo vakagadzirisa mabugs kwenguva yakareba uye hapana kuvandudzwa. Kwaziso
Pindura kuna Francisco Peña
Ndiri kupa vakasununguka hofisi mukana uye kazhinji wakavhara uye unokonzeresa kuti system iturike zvishoma. Ini ndinoshandisa Debian Buster. Inobata simba padyo kubva kune chinouraya uye painovhura zvakare inowana chikamu chegwaro. Chandiri kuenda ndechekuti mune yakasimba sisitimu izvi hazvifanirwe kuitika.
yekutanga OS 5.1.6 inounza shanduko nyowani kuAppCenter uye maFaera, pakati pezvimwe zvisinganyanyi kukosha maficha
Linux musika wemugove unoramba uchikwira, uchisimbisa maitiro